दलान नेपाल : के गर्लान मधेशी मोर्चा ?
के गर्लान मधेशी मोर्चा ?
at 12:18 AM Posted by Dalan
गएको ८० दिन देखि मधेशमा आन्दोलनमय छ । आन्दोलनको रापले मधेशका गाउ गाउ जलीरहेको देखिन्छन । तर सरकारी पक्ष यसलाई अझै ठोस रुपमा सम्बोधन गर्न तयार देखिएका छैनन । यस्तो अवस्थामा ठुलो प्रश्न आउन, अब के गर्छन त आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता मधेशी मोर्चा ? मोर्चाका शिर्ष नेताहरु भन्छन, यो हाम्रो अस्तित्वसंग पनि जोडिएकाले जे परे पनि आन्दोलन चलीरहन्छन । एक न एक दिन सरकारी पक्ष झुक्नै पर्छ । मोर्चाको आन्दोलन नाका र राजमार्गमा केन्द्रित भए पछि मधेशमा हिंसात्मक घटनाहरु बन्द देखिएका थिए । तर अचानक सोमवार एक विहानै विरगंज नाकामा धर्नामा बसेका आन्द्योलनकारीहरु माथी प्रहरीले धावा वोले पछि स्थिती फेरि भडकावमय देखिएका छन । सोमवार दिउसो नेपाली सुरक्षा वलको गोली लागेर एक भारतीय नागरिकको मृत्यू भए पछि स्थिती थप तनावपुर्ण देखिएका छन । सोमवारको विरगंज घटना लगतै मधेशका प्रायजसो सवै सहरहरु तनावपुर्ण वातावरणके सिर्जना भएको छ । सोमवार दिउसो देखि नै ठाउ ठाउमा आन्द्योलनकारीहरुले टायर वालेर उग्र नारावाजीहरुमा उत्रिएका छन ।
गएको शनिवार र आईतवार मधेशी मोर्चाको बैठक जनकपुरमा बस्यो । मोर्चामा आबद्ध चार ओटै मधेशी पार्टीहरुका शिर्ष नेताहरु जनकपुरमा तीन दिन वसेर हिजो सोमवार फर्केका छन । शिर्ष नेताहरु जनकपुरमै रहेको वेला सोमवार विहान विरगंज घटना हुन पुग्यो । त्यस पछि सोमवार विहानै फेरी एक राउण्ड सवै शिर्ष नेताहरु बसेर पछिल्लो परिस्थतीको वारेमा छलफल गरे । मोर्चा स्रोत भन्छन, शिर्ष नेताहरु पनि परिस्थती अत्यन्तै गम्भिर बनिसकेको विश्लेषण गरेका छन । बैठकमा सहभागी एक नेता भन्छन, तर आन्द्योलनलाई रती भर पनि कमजोर पार्नुको सटा मजवुत नै बनाउनु पर्ने पनि निचोड सवैको छ । बैठक पुर्व केहि सुचनाहरु वाहिर सार्वजनिक भएकानुसार वार्ता लाई भंग समेत पार्न सक्ने गरी मोर्चाले निर्णय गर्न सक्ने सम्मको वातावरण बनाउने वारेमा छलफल भयो । तर बैठक स्रोत भन्छन, जारी आन्द्योलन प्रति देखिएको अन्तराष्यि समर्थन र चासोका कारण पनि वार्ता वाट पछि नहटने निष्कर्ष मोर्चाले निकाले । उनीहरु सरकारी पक्ष वार्ता प्रति इमान्दार छैन भन्ने कुराको पुष्टि पनि वार्ताकै टेवलमा देखिने गतिविधीले हुने भएकाले वार्ता प्रति मोर्चामा नाकारात्मक धारणाको वढावा नदिन सवै पक्ष सहमत भए ।
मोर्चाका शिर्ष नेताहरु बैठकमा आन्दोलनको राजनितीक सम्बोधन गराउनका लागी विभिन्न तहहरु वाट भईरहेको पहललाई समेत तीव्रता दिने वारेमा आन्तरिक छलफल गरेका थिए । बैठक स्रोत भन्छन, आउदो २५ गते दिपावली आउदै छन, १ मंसीरमा छठ पर्व छ । स्रोत भन्छन, मोर्चाको तर्फवाट आउदो २१, २२ गते सम्ममा आन्दोलनलाई सम्बोधन होस भन्ने चाहनाका साथ विभिन्न पहलकदमीहरु सुरु गरिने निष्कर्ष निकालेका छन । यदी सरकारी पक्ष आउदो २१, २२ गते सम्म वार्ता मार्फत ठोस निष्कर्षमा नपुगेको खण्डमा दिपावली देखि छठ सम्म अघोषीत रुपमा आन्दोलनलाई खुकुलो बनाउन र त्यस पछि अत्यन्तै कठोरता पुर्वक आन्द्योलन चर्काउने रणनिती वारेमा समेत छलफल भएको थियो ।
मोर्चाको बैठकमा जारी आन्दोलनमा अन्तराष्टिय चासो वारेमा समेत गम्भिर छलफल भएको थियो । बैठक स्रोतका अनुसार मोर्चाको बैठकमा जारी आन्द्योलनको क्रममा केहि ठाउमा चिनको झण्डा जलाए पछि त्यसले आनद्योलनको वारेमा नाकारात्मक सन्देश जान सक्ने भएकाले त्यस प्रति सवै पक्ष आन्तरिक रुपमा सचेत रहने निष्कर्ष निकालेका थिए । बैठकमा भारत, चिन, सहित अमेरिका, संयुक्त राष्ट महासंघ लगायतका विदेशी पक्षहरु आन्द्योलन प्रति अत्यन्तै साकारात्मक रहेको निष्कर्ष थियो शिर्ष नेताहरुको । युरिपियन युनिएन अन्य पक्ष भन्दा कम साकारात्मक रहेको निष्कर्ष समेत बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।
बैठक स्रोत भन्छन, जारी आन्दोलनको सम्बोधन दिपावली देखि छठ सम्म नभएको खण्ड स्थिती अत्यन्तै असहज मोड लिन सक्ने निष्कर्ष मोर्चाको छ । कतिपय नेताहरु भन्छन, त्यसमा पनि सोमवारको विरगंज घटनाले स्थिती थप कता लान्छन त्यो भन्न सकिन्न ।